वाम एकता वैशाख ९ मै घोषणा नहुने ! किन यस्तो भयो ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
वाम एकता वैशाख ९ मै घोषणा नहुने ! किन यस्तो भयो ?
काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच तोकिएको मितिमै पार्टी एकता घोषणा हुनेमा संशय देखिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवस पारेर आगामी वैशाख ९ गते एकता घोषणा गर्ने अनौपचारिक कुराकानी भए पनि आन्तरिक तयारी सुस्त छ ।
पार्टी एकतासम्बन्धी विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्न गठित कार्यदलले वैशाख ९ मा पार्टी एकता गर्न सुझाएको थियो । त्यही दिन घोषणा गर्ने गरी दुवै दलले आ–आफ्नो पार्टीमा आन्तरिक तयारी अघि बढाउने भनिएको थियो । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको ।
यद्यपि पार्टी एकताकै विषयमा छलफल गर्न भन्दै एमालेले बोलाएको वैशाख ६ को पोलिटब्युरो र ७ गतेको केन्द्रीय समिति बैठक भने यथावत् छन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा चन्द्रकान्त राउत (सिके) लाई नेकपा अध्यक्ष तथा […]
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चढ्नुभएको विमान आकाशमा केहीबेर ‘होल्ड’ गरिएको सम्बन्धमा छानबिन हुने […]
राजपाविना पनि वर्तमान सरकारका लागि दुई तिहाई पर्याप्त,यस्तो छ अंकगणित
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन बुधबारबाट फिर्ता लिएको जनाएको छ । […]